Computer & Cell Phone » 2Millions ကျော်ရှိ Page တစ်ခု အလိမ်လည်ခံရခြင်း	15
လုံမလေးမွန်မွန် says: အတော်ညံ့တဲ့ဘော့်စ်လို့ အရင်ပြောလိုက်မယ်.. :D
ဒေါ်လာတစ်ထောင်ဆိုတာ မနည်းဘူး.. လွှဲပေးပြီးမှ ကိုယ့်ကို ပြန်မပေးရင်လည်း ဒုက္ခ… ဘာပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး.. online ဆိုတာမျိုးက အပြင်မှာ အလဲအလှယ်လုပ်သလို ရော့ပတ္တမြား ရော့နဂါး လုပ်လို့ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေ… ပိုသိတဲ့သူတွေ ဝင်ပြောမှာကို စောင့်ဖတ်နေပါမယ်…
အောင် မိုးသူ says: အခုတော့ ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲ ဟိုမိန်းမက ပေ့ခ်ျပေါ်မှာ လျှောက်တင်နေပြီ။ မူမှန်ပါဘူး။ Like ၂သန်းကျော်
kai says: ၁ထောင်ပြီး.. ၂ထောင်.. ၂ထောင်ပြီး.. ၃ထောင်.. ၃ထောင်ပြီး.. ပြီး..
ပုံမှန်လိမ်နည်းလို့ပြောတာပါ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ပြောချင်တာ သူ့ကိုပဲ ဟိုအလကားလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လိုချင်တက်သွားတာ။ သူက အဲ့လိုပဲ ဘယ်သူ့ဆီက ဘယ်လိုရမလဲဆိုတာပဲ ကြည့်တာ ခုတော့ထိပြီ။ ဟိုမိန်းမကို တစ်ထောင်ပေးလိုက်လည်း ပြန်ပေးမလား
ဇီဇီခင်ဇော် says: နှမြောစရာ…
ဟီးဟီးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အခုက ပိုက်ဆံမပါသေးဘူး ပေ့ခ်ျပြန်ရဖို့ ပိုက်ဆံတောင်းနေတာ။ ဒေါ်လာ တစ်ထောင်လောက်ကတော့ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမယ့် တစ်ထောင်နဲ့တော်မှာမဟုတ်ဘူး။
Alinsett @ Maung Thura says: တရုတ်သိုင်းကားတွေထဲက ဘုရင်မင်းမြတ်လို ပြောရရင်..
ကထူးဆန်း says: thank you . လိမ်နည်း တစ်ခု သိသွားပြီ ။။
မြစပဲရိုး says: Hay … don’t pay them evenapenny.
အောင် မိုးသူ says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရီးရေ ဒါပေမယ့် ရုံးမှာ ကျွန်တော်က အဲ့သည်ပေ့ခ်ျနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာဏာမရှိသူပါ။
Ma Ma says: ဟုတ်ပ့ါ။ ကထူးဆန်းပြောသလို လိမ်နည်းတစ်ခု သိလိုက်ရပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: http://7daydaily.com/story/44684
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ပါတယ် ရိုးရာလေးပါ။
kai says: https://www.facebook.com/MyanmarNewsAlerts
ကောက်ဝယ်လိုက်မှနဲ့တူတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ပထမကတည်းက ဘလူးတစ်ရအောင် ဗရီဖိကေးရှင်းလုပ်ပေမးယ်ဆိုပြီးလာတယ်။ ဘောစိဆီက ဒေတာတွေတောင်းတယ်။ သူ့အကိုအက်မင်ပေးခိုင်တယ် အက်မင်ပေးလိုက်တော့ ရှိသမျှအက်မင်တွေအကုန်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ ရပလိုင်းမလာတော့ဘူး။ ပထမဆုံး Yoyarlay Myanmar News ဆို နာမည်ပြောင်းတယ်။ အမှန်ဆို လူများရင် နာမည်ပြောင်းလို့မရဘူး။